Ụbọchị My Pet » 15 Best Twitter Nnabata ka Soro maka dịwara Ndụmọdụ na 2015
site Bridget Sirtonski
15 Best Twitter Nnabata ka Soro maka dịwara Ndụmọdụ na 2015
emelitere ikpeazụ: Jan. 17 2021 | 4 min agụ
Na anyị ugbu a digitally chụpụrụ mmadụ, anyị na-adabere na-achọta ọtụtụ n'ime anyị na ozi si internet. Ọtụtụ ndị na-eji na-elekọta mmadụ media akpan akpan na-aka ndị enyi na ezinụlọ na nọgidesie emelitere na ugbu a na-eme n'ụwa, ma ihe banyere ihe na-mmekọrịta ndụmọdụ?
Twitter na-enye ọrụ ohere ịkọrọ ọmụma na- 140 odide ma ọ bụ obere na ha na-eso ụzọ. Ọtụtụ ndị jumped na ohere iji Twitter dị ka ihe tinyekwa bụghị nanị njikọ ọrụ ha ma na-enye ndụmọdụ ndị bụ ndị nwere mmasị.
E a plethora nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọrịta dere, blọgụ na ndị ọkachamara tinye n'ọrụ Twitter dị ka n'ọnụ dishing si mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụmọdụ. M weere a ndepụta ụfọdụ oké Twitter ndekọ ndị dabeere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọrịta ndụmọdụ. Ma ị na-achọ Atụmatụ na otú mma gị na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ ma ọ bụ na-achọ ndụmọdụ banyere otú obibi a ọjọọ gbasaa, ndị a Twitter ndekọ nwetara gị kpuchie!
Ya mere enweghị n'ihu nātu ùzù, ebe a bụ ndepụta nke (m umeala n'obi uche) na 15 kasị mma Twitter ndekọ na-eso ma ọ bụrụ na ị na-achọ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụmọdụ:
Shannon bụ a ọkà n'akparamàgwà mmadụ na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọrịta onye edemede nke bipụtara na nso nso a akwụkwọ agba gburugburu gburugburu nchegbu nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-enye elu na-eru nso na usoro na-esi mee na nchegbu na-abanye na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụwa. Were a anya ya Twitter ndepụta maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụmọdụ isiokwu azum.
Julie bụ otu ọkachamara na navigating ụwa nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ugboro ugboro Posts njikọ isiokwu videos banyere mmekọrịta ya nduzi. Soro ya Twitter ndepụta ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na-amụta ihe banyere otú iji mee ụwa nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.
Simone bụ a mmekọahụ & mmekọrịta blogger onye tackles ọ bụla na ihe niile isiokwu nyere ya. Ọ bụrụ na ị na-achọ onye edemede n'atụghị egwu eneme isiokwu sitere na site online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị otú ịzụta sexy lingerie, jide n'aka na iji lelee ya Twitter ndepụta n'ihi njikọ mkpa isiokwu.
Erọn na Josh bụ enyi gị abụọ ndị nọrọ n'ụlọ a Podcast lekwasịrị anya mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, mmekọrịta na mmekọahụ ndụmọdụ. Mgbe ọ na-abịa isiokwu ha dị njikere atụle, ọ dịghị ihe oyi ókè. Ọ bụrụ na ị na-itching ịnụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ndụmọdụ si abụọ na-akpa ọchị na kpamkpam n'eziokwu ụmụ okorobịa, ahụ anya ha elu na Twitter.
Dị nnọọ Kirsch (jen_kirsch)
Jen bụ onye edemede na mmekọrịta ọkachamara emi awade ndụmọdụ maka ndị agụụ na-agụ na-amụta ihe banyere mgbe-n'ịghagbu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụwa. Ọ na-atụle-achị dị ka ịnọgide na-enwe ogologo anya mmekọrịta, otú ka atụmatụ ihe ịtụnanya mbụ ụbọchị na otú obibi ndakpọ, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ isiokwu. Pịgharịa site na ya Twitter na-eri nri iji chọta njikọ ya mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọrịta isiokwu nakwa dị ka ụfọdụ ngwa ngwa Atụmatụ.
April bụ a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nchịkwa ndị specializes ke dishing si mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụmọdụ maka inyom n'elu 40. Ya mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọrịta a na-zuru ezu na ihe ọmụma, dị ka ya Twitter ndepụta, otú elele ya ma ọ bụrụ na ị na-achọ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụmọdụ maka inyom tozuru okè.
Christan bụ a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọkachamara na-ede kọlụm na nke ahụ bụ Gịnị Ị na Single. Ọ na-atụle isiokwu sitere na site esi mee ka a mbụ ụbọchị ịtụnanya uru nke ịbụ otu. Ọ na-agba ume ya Twitter na-eso ụzọ na-arụ ya na ya site n'ido onwe ha mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ajụjụ. Ọ bụrụ na ị na-ere ọkụ a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ajụjụ ị chọrọ zara, lelee ya Twitter ndepụta.
Echiche katalọgụ (ThoughtCatalog)
Echiche katalọgụ awade a nchịkọta mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, mmekọrịta na mmekọahụ ndụmọdụ isiokwu dere ọtụtụ dị iche iche nkwado ha website. Ha isiokwu bụ mgbe niile na-akpa ọchị na ubé racy, otú a website (na Twitter ndepụta) zuru okè n'ihi na ndị na-enwe ekele maka a brutally n'eziokwu obibia.
Joshua bụ ihe online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọkachamara onye dere ọtụtụ isiokwu na ihe karịrị afọ banyere ya nke ebe nka. Ebe ọ bụ na ọ bụ ya bụ a pro nọ n'ógbè online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ọ na-atụle isiokwu dị ka otú nka a n'elu-àgwà email ka zuo okè gị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ. Josh ugboro ugboro mmelite ya Twitter akaụntụ na mkpa isiokwu, wee jide n'aka iji lelee ya ndepụta ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ Atụmatụ banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị online.
YourTango bụ ihe ọzọ na website na nwere ihe n'ụba nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọrịta ndụmọdụ isiokwu deere ha nnukwu ìgwè ndị so dee. Ha isiokwu ekpuchi ihe niile n'okpuru anyanwụ banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ógbè, otú lelee ha Twitter ndepụta ịchọta isiokwu ọ bụla na ihe nile banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.
Anụmanụ Solomon (thedatingtruth)
Anụmanụ bụ a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọkachamara na-enye ahaziri mmekọrịta ndụmọdụ ma nwoke ma nwaanyị ma na-enye ya ịghọta ihe dị iche iche mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mbipụta ọtụtụ ná ndị mmadụ chere ihu, ka otú ịgwa ma ọ bụrụ na onye ị na-akpa ezi gị ka ị otú kwụsị adọta ndị ọjọọ. Soro ya na Twitter nke njikọ ya isiokwu ahụ mgbe ụfọdụ mmekọrịta quip.
Dan obi tara mmiri (fakedansavage)
Dan bụ onye edemede na mmume popularly mara maka ya mmekọahụ ndụmọdụ kọlụm obi tara mmiri Ịhụnanya ya dị Podcast obi tara mmiri Lovecast, ebe ọ na-atụle omenala na na-abụghị omenala mmekọrịta nsogbu. Lelee ya Twitter ndepụta ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ Ugbu, risque ma eziokwu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụmọdụ.
Erin bụ a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị guru onye ọ bụghị nanị na awade Dere ndụmọdụ kamakwa akwado ya na redio na-egosi na atụmatụ ya ịghọta na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụwa. Ya isiokwu mbio mbụ nsusu Atụmatụ akpa on a mmefu ego. Soro ya na Twitter n'ihi njikọ videos, isiokwu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Atụmatụ.
Antonio bụ a ọkà n'akparamàgwà mmadụ na Mmekọrịta agwọ ọrịa na-enye ndụmọdụ na ngwọta maka ihe ọ bụla na ụdị nile nke mmekọrịta nsogbu. Were a anya ya Twitter akaụntụ, dị ka ọ na-Posts ngwa ngwa mmekọrịta Atụmatụ na-eto eto ibe na njikọ ya isiokwu.
Wilma bụ a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị blogger àjà na ndụmọdụ ya banyere ịlụ mgbe ịgba alụkwaghịm, dabeere kpamkpam na ya ahụmahụ onwe onye. Lee ya Twitter akaụntụ ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na-agụ banyere ya ịghọta banyere abanye mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọdọ mmiri mgbe ịgba alụkwaghịm.
4 Atụmatụ maka a mbụ Ụbọchị